Nayroobi oo Samada Heehaabaysa, Hello Kiliminjaaro iyo “The Pinnacle” (sawirro) – Radio Daljir
Nayroobi oo Samada Heehaabaysa, Hello Kiliminjaaro iyo “The Pinnacle” (sawirro)
Juunyo 27, 2017 7:25 g 0
Dhismaha hadda Afrika ugu dheer waa mid ku yaal Johannesburg, Koonfur Afrika, waana Carlton Centre, waa 50 dabaq, 223 mitir, waxaana la dhisay 1973, walina asagaa calanku u lushaa oo Afrika cidi kama sarmarin.
Nabadeey Carlton Centre oo soodhawoow “The Pinnacle!” The Pinnacle waxaa hadda dhagaxdhigay Madaxweyne Kenyatta, waxaana dhisanaya Hass Petroleum Group, lagana dhisayaa janshanka Upper Hill Road iyo Jidka Hayle Salaase. Dhimuhu wuxuu ku kacayaa adduun dhan $200 milyan, waxaana la dhammaynayaa dhammaadka sannadka 2019.
The Pinnacle waa 70 dabaq, kana koobnaan doonaa 255-qol oo Hilton Hotel ah, qolal raaxo oo ijaar ah, kuwo xafiisyo iyo ganacsi, iyo fooq diyaradda helikobterku ku degto, kana duusho.
The Pinnacle wuxuu ku soo biirayaa dhismayaasha adduunka ugu dhaadheer.
Burj Khalifa ee Dubai waa kan ugu dheer adduunka waana 800 mitir, waxaa ku xiga Petronas Towers ee Malayshiya oo ah 400 mitir, meesha The Pinnacle ka noqon doono 300 mitir.
Mashruuca dhismaha waxaa helay shirkadda dawliga ah ee Shiinaha lana yiraahdo “China State Construction Engineering Corporation (CSCEC)” kuna jirta liiska hore ee shirkadaha ugu waaweyn adduunka ee wax dhisa, noocu rabo dhismuhu ha noqdee. CSCEC waxay hore u dhistay Dhismaha Midowga Afrika ee Addis Ababa. Shirkadda kale ee ay leedahay ee China Civil Engineering Corporation (CCECC) waxay ayana horay u dhistay Gegida Diyaaradaha ee Bossaso, Bander Qassim International Airport.
Cabdinaasir Cali Xasan, Guddoomiyaha Hass Petroleum Group, ahna shirkadda iska leh The Pinnacle, saxiixa heshiiska dhismaha ee guushu ku raacday CSCEC wuxuu ku macneeyey “mid fure u ah xiriirka Shiinaha iyo Afrika, mashruucaan Pinnacle asna wuxuu noqon doonaa albaabkii dahabiga ahaa ee Afrika laga soo geli lahaa.”
Saxiixa heshiiska Hass & Shirkadda dhismaha Shiinayska
Cartleton Centre, Johannesburg, Koonfur Afrika
Siyaasadda & Dhaqaalaha 466 Wararka 18322
Reer Sacuudi oo is Afgambiyey iyo Saadaasha Fog ee Sacuudiga